Media | Justice For Myanmar
ဦးပိုင်အတွက် ဘဏ္ဍာငွေဖော်ဆောင်ပေးနေတဲ့ Star Sapphire Group ကို ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ဖို့ JFMတောင်းဆို
အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုပိုင် ဦးပိုင်အတွက် ဘဏ္ဌာငွေတွေ ဖော်ဆောင်ပေးနေတဲ့ Star Sapphire Groupကို ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ဖို့ Justice For Myanmar က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
In an investigative report released on June 14, Justice for Myanmar (JFM) detailed how the military-owned telecommunications company Mytel had given away “hundreds of thousands” of SIM cards and forced active members of the Myanmar military to sign up for their subscriptions program.
ဂျပန်နှင့် တရုတ်ပါဝင်မည့် အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေး စစ်ကောင်စီတက်ဖွယ်ရှိ
ကန့်ကွက်မှုများရှိသော်လည်း ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေး (ADMM) ကို အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦး တက်ရောက်ရန်ရှိနေသည်။
The United Kingdom has imposed sanctions on three Myanmar and three Russian companies that have supplied aircraft parts to junta forces.
Justice For Myanmar welcomes added UK sanctions on arms dealers
The NGO Justice For Myanmar has welcomed the UK government’s second round of sanctions targeting arms dealers trading with the military junta.
မြန်မာနဲ့ ရုရှ စစ်လက်နက် ပွဲစားများအပေါ် ယူကေနိုင်ငံက ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်များ ချမှတ်
မြန်မာ့လေတပ်ကို လက်နက်ပေးသွင်းနေပြီး၊ စစ်ကောင်စီရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေမှာ ကြံရာပါ ပတ်သက်နေတဲ့ ရုရှားစစ်လက်နက် ရောင်းချသူကုမ္ပဏီ ၃ ခုနဲ့ မြန်မာစစ်လက်နက်ပွဲစား ကုမ္ပဏီ ၃ ခုတို့ကို ယူကေနိုင်ငံက ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေ ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
မြန်မာအကြမ်းဖက် စစ်တပ်ကို အာဆီယံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး (ADMM) မှ မဖြစ်မနေ ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်
မကြာမီ ရောက်လာတော့မယ့် ဇွန်လ ၂၁ ရက်ကနေ ၂၂ ရက်အထိ ကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့ အာဆီယံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး (ADMM) ကို တက်ရောက်ဖို့ အကြမ်းဖက် အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး မြထွန်းဦး ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကို သွားရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
UK announces second round of sanctions against arms dealers
Campaigning group justice for Myanmar has welcomed the UKs second round of sanctions targeting arms dealers obtaining arms for Myanmar.
နိုင်ငံထက် ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကိုသာ မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ပထမဦးစားပေးဟု JFM ထုတ်ပြန်
“မြန်မာစစ်တပ်သည် ၄င်း၏ရာဇဝင်တွင် တခါမျှ မရှိခဲ့ဖူးသော မြန်မာစစ်တပ်၏ ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့်ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ဗီယက်နမ် စစ်တပ်သို့ လက်လွှဲပေးအပ်ခဲ့သည်” ဟု JFM က ထုတ်ပြန်သည်။